Tsy mahavita adidy ianareo ! | NewsMada
Tsy mahavita adidy ianareo !
Par Taratra sur 12/04/2018
Na « ray aman-dreny » io na « raiamanadreny », ny fomba fanoratra ireo anarana ireo no samy hafa fa ny hevitra fonosiny, toa mitovitovy ihany, samy mpanabe sy mpitaiza. Samy manana adidy goavana eo amin’ny tany ama-monina, amin’ny taranaka amam-para, sns. Matoa manan-taranaka ratsy taiza ny Malagasy, tsy nahavita adidy ianareo ireo, na ny sasany aminareo. Tsy nanabe araka ny tokony ho izy ianareo. Nomenareo sy omenareo fanabeazana mitsingilahila tsy mifanaraka amin’ny maha izy azy ny taranaka malagasy. Vokisanareo hevi-diso sy fitaka ary lainga ny Malagasy.
Refesinareo sy kajinareo eo ambony latabatra ny fiarahamonina malagasy, hany ka diso ny ankamaroan’ny fitaizana sy fanabeazana omenareo. Miainga eo anivon’ny tokantrano, mipaka hatrany amin’ny firenena, tratran’io tranga io avokoa. Taiza teo amin’ny fomba fitaizan’ny Malagasy ny taranany, ohatra, no hisy ray aman-dreny niteraka manan-janaka hanorin-tokantrano ka hilaza fa : « aleo hikambana ireo fa samy zanak’Andriamanitra » ? Naninona no tsy nampianarinareo ny taranakareo fa ilaina ny manadihady ny mombamomba ilay olona hovadina (izy, ireo fototra nipoirany, sns) vao miroso amin’ny tokantrano. Antony iray goavanabe mampisaritaka sy tsy mampirindra ny fiainam-piarahamonina malagasy amin’izao fotoana izao ny fanatolahana ny hoavin’ny taranaka amin’Andriamanitra irery, tahaka io. Ianareo raiamandreny indray, nahoana no vokisanareo lainga ny zaza malagasy ka tsy ny tenindreniny no hoenti-mampianatra fa ny tenin’ny hafa ? Nahoana no tsy misy paika mazava narafitrareo hoenti-mampahafantatra sy hampitiavana ny Malagasy, izay rehetra momba azy ? Tsy mahagaga raha tavanin’ny vahiny sahala amin’izao ny harem-pirenena…
Ohatra ihany ireo fa marobe ny porofo maneho ny tsy fahavitan’ny « ray aman-dreny » sy ny « raiamandreny », sasany, ny adidiny. Sa ve tsy raisinareo ho adidy intsony ny fanabeazanareo ny taranakareo ?